महिला सांसदले ‘स्वस्थानीका पाना च्यात्नुपर्छ’ भन्दा धर्म भाँड्न खोजेको आरोप लगाइयो, तार्किक होइन भावनात्मक बहस गरियो
यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको राष्ट्रिय नारा ‘समानताको पुस्ता : अन्त्य गरौँ हिंसा, विभेद र असमानता’ तय भएको छ । यस नाराले एउटा आह्वान गरेको छ । यो आफैँमा नयाँ आह्वान भने होइन । वर्षौंदेखि महिलामाथिको विभेद अन्त्य गर्न र महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न यस्तै खालका नारा तथा आह्वान गरिँदै आएको छ । र, यो तय छ कि अबका केही दशक यी वा यस्तै नारा र आह्वानले निरन्तरता पाउनेछन् । किनकि, महिलामाथि विभेद, हिंसा र असमानता नेपालसहित अहिलेको विश्वको लगभग सबैजसो देशको यथार्थ हो, तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको सत्य हो ।
विभेद, हिंसा र असमानताका कुरा किन ?धेरैको मनमा लाग्दो हो– महिला अधिकारका कुरा आखिर कहिलेसम्म ? यसको एकदम सजिलो जवाफ छ– जबसम्म लैंगिक विभेद कायम रहन्छ । विभेद, हिंसा र असमानताका कुरा किन उठाउने ? किनकि, महिलामाथि अन्यायको सिलसिला जारी छ । यी जवाफ जति सजिला लाग्छन्, यथार्थमा महिलामाथि हुने विभेदको विरोधमा आवाज उठाउन त्यति सजिलो छैन । न त परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रिया नै त्यति छिटो र सरल छ । ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ले जारी गरेको ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट २०२०’ ले विश्वव्यापी लैंगिक खाडल हट्न अझै करिब सय वर्ष लाग्ने देखाउँछ । यस अध्ययनले आर्थिक सहभागिता र अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आयु र राजनीतिक सशक्तीकरण गरी चारवटा आयाममा विभेदको अध्ययन गर्छ ।
देशभित्रै हरेक दिनजसो विभेद, हिंसा र असमानताका विषय देखिन्छन्, सुनिन्छन् वा भोगिन्छन् । आज पनि नजन्मिँदै आमाको पेटमा लिंग पहिचानपछि हुने भू्रणहत्यादेखि छोरी जन्मिएपछिको विभेदसम्म हाम्रो सामाजको यथार्थ हो । देशको कुनै भूभागमा महिलाले घरेलु हिंसा भोगिरहेका होलान् भने कतै दाइजोको नाममा अत्याचार ! कतै महिनावारीका वेला एक्लोपन होला त कतै एसिड आक्रमणको सन्त्रास । कतै यौन शोषणको चर्को रूप होला त कतै बलात्कारका घटना । धनी–गरिब, गाउँ–सहर वा शिक्षित–अशिक्षित सबै खालको समाजको यथार्थ हो लैंगिक विभेद । त्यसैले हामीले विभेद, हिंसा र असमानताका कुरा गरिरहन आवश्यक छ ।
नेपाली समाजमा विभेदको एउटा मात्र आयाम छैन । धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक वा अन्य धेरै क्षेत्रमा महिलामाथि विभेद छ । महिलामाथि हुने कतिपय विभेद सजिलै देख्न र भन्न सकिने छन् भने कतिपय विभेद धारणागत छन् । समाजमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका त्यस्ता धारणागत विभेदका स्रोत धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, सामाजिक सिकाइ वा अन्य यस्तै हुन सक्छन् । यस्ता विभेदको विरोधमा आवाज उठाउन कठिन हुन्छ ।
हालै संसद्मा एक महिला सांसदले ‘स्वस्थानीका केही पाना च्यात्नुपर्छ, किनभने ती कथामा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण समस्याग्रस्त छन्’ भन्ने विचार राख्नुभयो । च्यात्नुपर्छ भन्ने शब्दलाई लिएर उहाँको अभिव्यक्ति विवादास्पद मात्र भएन, कतिपयले उहाँलाई धर्म भाँड्न खोजेको आरोपसमेत लगाए । तार्किक होइन, भावनात्मक बहस भए, त्यो अभिव्यक्तिको विरोधमा । खासमा उहाँको आशय धार्मिक कथाका त्यस्ता खण्डमाथि अब पुनर्विचार गरौँ, जसले महिलालाई मानवका रूपमा चित्रणसमेत गर्दैनन् भन्ने नै थियो ।
सामाजिक सिकाइमै विभेद सिकाउन सक्ने एउटा कथालाई पुनर्विचार गरौँ भन्दा जस्तो खालको विरोध भयो, त्यो मानिसको धारणा र व्यवहारमा रूपान्तरण कति जटिल छ भन्ने उदाहरण हो । र आउँदा वर्षमा पनि हाम्रो लडाइँ यी र यस्ता कथाबारे रही नै रहनेछ, जसले समाजमा जरा गाडेर बसेको छ । व्यक्तिगत रूपमा म यी र यस्ता विषयमा बोल्नै नपर्ने गरी समतामूलक समाज निर्माण होस् भन्ने चाहन्छु ।
म अब आउने महिलाको पुस्ताले विभेद भोग्न र देख्न नपरोस् भन्ने चाहन्छु । सामाजिक सम्बन्धहरू, आर्थिक अवसर, शक्ति संघर्ष, पारिवारिक वातावरण र स्वतन्त्रता अनि व्यक्तिगत अधिकार र अवसरलगायत धेरै पक्षले समानताको पुस्ता निर्माणमा भूमिका खेल्छन् । तर, यी हरेक ठाउँमा समानताको प्रत्याभूति हुने गरी परिवर्तन आउन निरन्तरको बहस, संघर्ष र खबरदारी आवश्यक छ ।
महिला आन्दोलनभित्रै आफैँमा विविधता हुनु नौलो होइन । समानताको यस अभियानमा विविधता हुन्छ । फरक–फरक दृष्टिकोण हुन्छन् र छन् । माग र शैली पनि फरक–फरक हुन्छन् र छन् । तर, समानताको अभियान आधारभूत विषयमा सहमत छ । त्यो भनेको महिलामाथि विभेद छ र त्यो विभेदको अन्त्य आजको आवश्यकता हो । यो बुझाइ स्पष्ट हुनुपर्छ । यो स्पष्ट बुझाइलाई अनेकथरी कुतर्क गरेर बंग्याएर प्रस्तुत गर्न आवश्यक छैन ।
कतिपयलाई राजनीतिक आन्दोलनको सफलता, जननिर्वाचित सरकारको गठन वा महिला राष्ट्रपति वा महिला सभामुखको चयन आदि विषयसँगै अब महिलाको माग सम्बोधन भइसकेको भन्ने लाग्न सक्छ । यो बुझाइ राजनीतिक दलहरूको मुख्य नेतृत्वमै पनि रहेको छ । यो बुझाइका कारण त्यो तप्का महिला आन्दोलनका मागलाई एनजिओको एजेन्डाको संज्ञा दिन्छ । र, आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोज्छ । त्यो तप्का समानताका मागप्रति असहिष्णु छ । यो तप्कामा महिला आन्दोलनको आशय र मागप्रति स्पष्टता हुन जरुरी छ ।
राजनीतिक दल तथा सरकार केमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने महिला अधिकार र समानताको माग वा अभियान कुनै दलविरोधी अभियान होइन, सरकारविरोधी एजेन्डा होइन
हामीले सबैको सहभागितासहितको आन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गर्‍यौँ । अब यही व्यवस्थालाई कसरी महिलामैत्री बनाउने ? कसरी समानता ल्याउने ? कसरी विभेद हटाउने ? कसरी हिंसा अन्त्य गर्ने ? महिला प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नमाथि अर्थपूर्ण विमर्श र जवाफको खोजी गरिरहेको छ नेपालको महिला आन्दोलनले । नेपालको महिला आन्दोलनले नयाँ व्यवस्था खोजेको होइन, विद्यमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै अर्थपूर्ण रूपान्तरण खोजेको हो । र, राजनीतिक परिवर्तनका लागि लड्ने महिला नेतृत्वको उच्च कदरका साथ नयाँ पुस्ताले यी प्रश्नलाई बुलन्द गर्न आवश्यक छ ।
अबको दृष्टि र दिशा
लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ र समुन्नत लोकतन्त्र नै हो । व्यक्तिगत रूपमा मलाई हामीले सबै समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ‘फ्रेम’मा खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । महिला आन्दोलनको लामो संघर्षको परिणामस्वरूप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित लिखत र सहमति कार्यान्वयनका लागि अग्रसर रहनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सुरुवातमा न्याय प्रवाह गर्ने संस्था निर्माण र सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । आज पनि कोही महिलाले आफूमाथि हिंसा भयो भनेर न्याय माग्दा भोग्नुपर्ने सास्तीमा कमी आएको छैन । महिलाले भोगिरहेका यी समस्याको समाधान गरौँ भन्ने मागलाई ‘एनजीओको एजेन्डा’को संज्ञा दिएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दै मिल्दैन ।
साथै, अबको आवश्यकता घटनाभन्दा प्रणाली र प्रवृत्तिको विश्लेषण र दीर्घकालीन सुधारको हो । घटनासँगै हामीले ती घटनाका सन्दर्भमा न्याय प्रवाहमा केकस्ता कमी–कमजोरी भए र भविष्यमा त्यस्ता कमी–कमजोरी नदोहोरिन प्रणालीमा कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने बहसलाई सँगसँगै लिएर जान आवश्यक छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अग्रसर हुनुपर्ने अर्को आवश्यकता छ । राजनीतिक दलले संविधानले नै व्यवस्था गरेको संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व गराए वा गराएनन् भन्ने खबरदारीदेखि हिंसाका घटनामा न्याय दिने निकायबाट हुने कमजोरीका सुधारसम्ममा अबको दिनमा बोल्न आवश्यक छ । संस्कृतिको नाममा निरन्तरता दिइएको विभेददेखि धर्मको आवरणमा संरक्षण गरिएका अन्धविश्वासलाई भत्काउनेसम्मका दायित्व महिला आन्दोलनको काँधमा छ ।
साथै राजनीतिक दल तथा सरकार पनि केमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने महिला अधिकार र समानताको माग वा अभियान कुनै दलको विरोधको अभियान होइन । सरकारको विरोधको एजेन्डा होइन । यो त मानव–अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उठाइएको आवाज हो । स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र अधिकारका लागि गरिएको संघर्ष हो । त्यसकारण राजनीतिक आवरण दिएर सरकारले महिला आन्दोलनका मागलाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु हुन्न ।
लोकतन्त्र भनेको परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनु पनि हो । जब ती परिवर्तन संरचनागत हुन्छन्, नीतिगत हुन्छन्, संस्थागत हुन्छन्, त्यसले समग्र प्रणालीको रूपान्तरण गर्छ । महिला आन्दोलनको अबको बाटो रूपान्तरण हो । यसका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले एकसाथ महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा र असमानता अन्त्य गर्न तीव्र सुधार थाल्नुपर्छ ।
संविधान तथा कानुनमा भएका विभेदकारी प्राबधानको पहिचान र संशोधन, न्याय प्रवाह गर्न सक्ने सबल संस्था निर्माण र सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि पहलकदमीको नेतृत्व सरकार र राजनीतिक दलले पनि लिन आवश्यक छ । महिला–अधिकार र समानताको मागलाई एनजिओको एजेन्डाको संज्ञा दिन छाडेर सरकार संरचनागत, नीतिगत र प्रणालीगत सुधारमा लाग्नुपर्छ ।
(लम्साल मानव–अधिकार, दिगो विकास तथा सशक्तीकरणका विषयमा कलम चलाउँछिन्)
बाहिर अस्तव्यस्त, भित्र व्यवस्थित
जोशी फर्किएपछि सर्वोच्चमा सकस
नक्कली की सक्कली ?
राजधानी सारेको विरोधमा धनगढी बन्द
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशमा जोशी नै रहने
खोइ दर्शन र सिद्धान्त ?
आम मानिसका निम्ति विकास भएकै छैन
पृथ्वीनारायण शाह चर्चा नगरिएका पक्ष
७५ फिट अग्लो ‘नेपाल आमाको मूर्ति’ निर्माण हुँदै
जो ‘एस म्यान’ उही पार्टीको रोजाइमा : सुशीला श्रेष्ठ